Translate Malagasy to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Malagasy to Myanmar (Burmese), Malagasy to Myanmar (Burmese) translations, Malagasy to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Salama manao ahoana ny fahasalamanao မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Misy olona ve? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Tena tia anao aho ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Ohatrinona ny vidin'ny Hamburgianina? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Afaka miantso taxi ve aho? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
miala tsiny aho ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Mahaliana ahy izany ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Voaroaka ny sidina nataoko အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Tonga eto aho mba hiasa ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hello, ny anarako dia မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Miala tsiny aho fa manambady ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Te-hanontany anao aho ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Afaka mitondra ahy any amin'ny seranam-piaramanidina ve ianao? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Aiza izao no fotoana izao, azafady? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Aiza ny biraon'ny polisy akaiky indrindra? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Azoko azoko alaina ve ny findainao? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Afaka manampy ahy ve ianao? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Mametra ahy hosotro, azafady? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Ohatrinona ny vidin'ity? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Tsy mahasalama ny gluten aho ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Miantsoa dokotera ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Misy dokotera ve? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Afaka mahazo antso ve aho? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Antsoy aho ny lehibenao azafady. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Tena mahafinaritra ity toerana ity ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Alefaso any amin'ny hotely aho azafady ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Inona ny nomeraon'ny efitranoko? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?